Qiso Gaaban Oo Cajiib Ah Oo Aan Ka Baran Doono Cashar Aanan Illoobi Doonin Wax Badana Na Xasuusin Doono… | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Published: February 3, 2017, 9:35 pm
(0) Comments Fadlan si fiican u aqri
8 daanyeer ayaa qol la geliyay. Jaranjar ayaa gidaarka ku tiirsan, waxaa safiiitada suran xirmo Moos ah. Mar kasta oo daanyeer isku dayo inuu jaranjarta fuulo waxaa daanyeerada dhan lagu shubayay biyo qabow, taasoo ay dhibsanayeen. Durbaba, mar kasta oo daanyeer isku dayo inuu mooska soo qabsado, kuwa kale oo aan rabin in biyaha barafka lagu shubo, ayaa soo dejinayay oo garaacayay. Waqti gaaban gudaheed, kuligood waxay ka quusteen inay jaranjarta fuulaan si ay ula soo dagaan muuska.
mid ka mid ah ayaa laga saaray, mid cusub ayaana lagu bedelay. Markuu arkay jaranjarta & muuska, wuxuu la yaabay waxay isugu dayi waayeen kuwan kale balse wuxuu si dhaqso ah u bilaabay inuu jaranjarta fuulo. Daanyerta kale oo dhan ayaa soo dejinayay oo garaacayay, isagu ma garanayo sababta loo dilayo & sababta ay muuska ula soo degi la’yihiin.
Mid labaad ayaa la bedelay kii cusbaa ayaa sidoo kale isku dayay balse kuwi kale ayaa garaacay. Mid mid ayaa loo saarayay sideedi u horeysay mar kastana mid cusub lagu bedelo oo isku day sameeya kuwa kale ayaa garaacayay, waxaa qolka ku jira 8 cusub oo lagu bedelay 8di hore, dabcan iyagu ma garanayaan sababta ay u garaacayaan hadba kan cusub ee yimaada balse wuxuu arkay kuwa kale oo sidaa sameynaya. Mid kasta oo ka horeeyay kan cusub wuxuu ku farxayay inuusan isagu ahayn markan kan la garaacayo.
Ogow, sideedan cusub midkoodna laguma shubin biyo qabow, fikrad kama hayaan waxay sidan u sameynayaan balse waa lagu program-gareeyay, maskaxda ayaa laga degay, waa aamineen oo aqbaleen in ay sidaa u noolaadaan.
Tani waa tijaabo ku dhisneyd falsafad ah habka dad maskaxda looga qabsan karo si loo maamulo ama raaciyad looga dhigo; Taasoo ah Hal mar wax ku samee ka dibna kuwa markaa jooga markay quustaan oo aaminaan iyagaa u gudbin doona kuwa ka dambeeya oo iyaguna sidaa aamini doona.
Marnaba ha quusan. Ha aaminin in aadan awood lahayn aad wax ku qabato ama is bedel ku sameyn karto. Waa in aan rumeysanaa in Alle SWT na siiyay awood aan ku bedeli karno nafteena, qoyskeena iyo Bulshadeenaba. Waa in aan aqbalnaa in aan annagu ka mas’uul nahay sida aan awoodaa Eebe ina siiyay ugu isticmaalno dhanka xun ama wanaagsan.
Waxa ugu fiican oo hal doorka iyo dadka indhaha u ah Bulshada maanta ay sameyn karaan waa in ay xooga saaraan sidi ay u soo saari lahaayeen, uguna jeexi lahaayeen wado wanaagsana kuwa ka dambeeya.
« Warbixinta Ka HoreysaySi Aaysan Kugu Dhicin Tanoo Kale, Weligaa ha u Shaqeyn is tus-tus iyo ha lagaa sheego!	Warbixinta Xigto »Cashar Dhab Ah Oo Aan Ku Baran Doono Duruusta Nolosha, Weligaa Ficilka Marka Koowaad Ku Dhaqaaq..!!	HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Leave a Reply Cancel reply